Cimilada: waa maxay, astaamaha, canaasiirta iyo isirrada | Saadaasha Shabakadda
Waa maxay cimiladu
Jarmal Portillo | | Cimilada
Waxaa jira dad badan oo isku qalda cimilada guud iyo saadaasha hawada. Markaan tixraaceyno cimilada waxaan sheegaynaa dhamaan qaababka kala duwanaanshaha isbadalkayaasha cimilada ee kaladuwan waqtiga. Isbedeladaan jawiga kuleylka ah ayaa ah heerkulka, qoyaanka, cadaadiska jawiga, nidaamka dabaysha, shucaaca qoraxda, iwm. Cimilada badanaa waa laga soocaa waqtiga maadaama tan hore loola jeedo xaaladaha muddada fog ee gobol. Saadaasha hawada waxaa loola jeedaa waqti gaaban.
Qormadan waxaan kuugu sheegaynaa dhammaan sifooyinka, noocyada, isirrada iyo cimilada.
1 Waa maxay cimiladu
2 Noocyada cimilada
3 Cimilada cimilada
Waxay loola jeedaa dhammaan qaababka kala duwanaanta ee doorsoomayaasha kala duwan iyo xaaladaha saadaasha hawada ee xiisaha leh. Astaamahan waxaa lagu qeexay gobol juqraafiyeed gaar ah. Gobollada juquraafiyeed ee kala duwan ee adduunka waxay leeyihiin cimilo xiriir la leh oo lagu go'aamiyay arrimo jireed iyo cilaaqaadka ka dhexeeya arrimahan. Qiyamyadan oo dhan ee isbadbadalada saadaasha hawada waxaa loo yaqaanaa nidaamka cimilada. Waxyaabahani waxay ku shaqeeyaan si habsami leh iyo isu soo noqosho xitaa cimilada ugu daran.
Qodobada isdhexgalka cimilada waa sida soo socota: jawiga, hydrosphere, lithosphere, biosphere iyo waxa biosphere. Isla mar ahaantaana, cimilada waxaa laga baranayaa aragtiyo kala duwan oo taariikhi ah si loo fahmo dhammaan sameynta iyo geedi socodka horumarka meeraheenna. Ujeeddada ugu weyni waa in la sameeyo saadaalin kala duwan iyo in la fahmo hababka loo diyaarinayo firfircoonida jawiga.
Cimiladu waa cunsur muhiim u ah qorshaynta hawlaha kala duwan ee aadanaha. Badanaa waxay saameyn ku yeelaneysaa dhammaan howlaha dhaqaale ee aadanaha ee u baahan xaaladaha deegaanka ee cayiman. Midkood waa beeraha. Wax ka beddelka cimilada adduunka sida ay tahay isbedelka cimilada iyo kuleylka adduunka ayaa saameyn xun ku yeelan kara nolosha aadanaha.
Waan ognahay inay kuxirantahay halka aan jogno iyo xaaladaha deegaanka hada jira ay jiraan cimilo kaladuwan. Tusaale ahaan, cimilada buuraha heer kulka guud ahaan waa qabow. Waxaa jira farsamooyin tiro badan oo lagu kala saaro cimilada iyadoo la adeegsanayo jaranjarooyin iyo daraasado ku saabsan arrinta. Kala soocidda ugu fudud ee dhammaantood waa in lagu xaadiro heerka kuleylka cimilo gaar ah. Aan aragno waxa ay ku kala duwan yihiin nooca cimilada iyadoo kuxiran heerkulka:
Cimilo diiran: Waa goobtaas oo soo bandhigta heerkul sarreeya oo joogto ah. Halkan waxaan ka helnaa dhulbaraha, kuleylaha, kuleylka kuleylka ah, lamadegaanka iyo cimilada-lamadegaanka. Cimiladan waxaa jira nidaamyo deegaan oo leh kala duwanaansho yar iyo kuwa kale oo leh kala duwanaansho badan. Waana isbedelka kaliya ee saameeya jiritaanka nolosha ma aha heer kul. Tusaale ahaan, cimilada kulaylaha waxaa jira qadar aad u badan oo ah dhir iyo fauna maadaama roobabku ay sarreeyaan.
Cimilo xumo: waa nooca cimilada dhexe ee u dhaxeysa kuleylka iyo qabowga. Waxay leedahay kala duwanaansho muhiim ah marka la eego xilliga iyo kala duwanaansho badan oo xagga saadaasha hawada ah. Halkaan waxaan ka heli karnaa kuleylaha qoyan, badda dhexe, badweynta iyo qaaradda.
Cimilada qabow: Waa halka heerkulka ugu hooseeya guud ahaan laga helo sanadka oo dhan. Waxay u muuqdaan inay leeyihiin wax kala duwanaansho yar marka loo eego xaaladaha xun ee aan u oggolaanayn horumarinta dhirta iyo xayawaanka. Waxaan leenahay jawiga cimilada, buurta ama tundra.
Cimilada waxay ka kooban tahay walxo taxane ah oo badanaa la cabiro lana qiimeeyo sanadka oo dhan si loo dejiyo xaaladaha deegaanka ee gobol. Waxaan arki doonnaa kuwaas oo ah waxyaabaha ugu waaweyn ee la darsay lana qiimeeyay si loo soo saaro saadaalinta muddada-dheer:
Heerkulka qolka: waa darajada kuleylka ama qabowga guud ahaan ka jira hawo hawo hawo gobol. Heerkulku wuu kacaa ama wuu isdifaacaa iyadoo kuxiran xaddiga shucaaca qoraxda ee saameynaya goobta gaarka ah
Cadaadiska Hawada: Cadaadiska Hawada waxaa lagu qeexaa culeyska hawada ku jirta jawiga. Waa cadaadiska ku dhaqaaqaya jihooyinka oo dhan cufnaanta hawada ku jirta jawiga gobol. Waa mid ka mid ah doorsoomayaasha inta badan saameeya cimilada kale ee cimilada iyadoo ay ugu wacan tahay dhaqdhaqaaqa jawiga.
Dabaylaha: nidaamka dabaysha ayaa ficil ahaan u sabab ah kala duwanaanshaha cadaadiska hawada. Waana isbeddeladaan ku dhaca cadaadiska cimilada waxay abuurayaan barokac hawadeed oo aan ku naqaano magaca dabaysha. Dhaqdhaqaaqan cufnaanta hawadu wuxuu u oggolaanayaa qaybinta dhammaan tamarta iyo kuleylka si siman aag.
Huurka: waa heerka uumiga biyaha ee ku jira jawiga. Qeyb ka mid ah wareegga biyaha ayaa ah marka biyuhu ku jiraan xaalad uumis oo jawigu sii jiro illaa ay isbeddelayaan xaaladaha deegaanku.
Roob uumiga biyaha badan ee ku jira cimilada wuxuu horseedaa uumiddeeda samaynta daruuro. Daruuraha waxaa daadiya dabaysha oo markay gaadhaan dhumuc gaar ah, dhibcaha biyuhu waxay ku dhacaan miisaankooda.
Waxaa jira qodobo muhiim ah oo lagu ogaanayo cimilada gobol. Aan aragno kuwa ugu muhiimsan:
Latitude: waxay ku saabsan tahay juqraafi ahaan halka uu ku yaal gobolka gaarka ah. Heerkulka hawada iyo dhacdooyinka falaadhaha cadceedda ayaa si weyn saameyn ugu leh. Waa ku mahadsan tahay latitude-ka in xilliyada sanadka si wanaagsan loo sharxi karo. Waana in heer kulku ku xidhan yahay heerka u janjeedha dhacdooyinka falaadhaha qorraxda.
Dhererka: kuleylka kuleylka ee deegaanka waa cunsur muhiim ah oo ku kala duwan hadba joogga. Maaha isku mid in la isbarbardhigo heerkulka heerkulka badda dherer cayiman. Caadi ahaan, qiimaha kuleylka kuleylka ee deegaanku waa 3 darajo 100kii mitir. Taasi waa, markaan sare ugu kacno, heerkulku hoos ayuu u dhacayaa. Sidoo kale cadaadiska Hawada.
Badweynta: dhaqdhaqaaqa biyaha badweynta ayaa mas'uul ka ah dib u qaybinta kuleylka iyo qabowga meeraha oo dhan.
Fogaanta badda: u dhowaanshaha xeebta fog ama meydadka waaweyn ee biyaha ayaa sidoo kale go'aamiya xaddiga qoyaanka ee ku jira hawada.
Relieve: Jihaynta qaabka juqraafiyeed ee dusha sare waxay ka dhigi kartaa aag u nugul abaarta ama qoyaan badan.
Jihada dabaysha: miisaanka hawadu way socdaan oo waxay u oggolaanayaan hawo kulul iyo qabow inay ku faafaan gobollo kala duwan.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan cimilada iyo waxa ay yihiin cunsurrada muhiimka ah ee saameeya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Cimilada » Waa maxay cimiladu